A na-ahụ LG X Mach na LG X Max na vidiyo vidiyo nkwado abụọ | Akụkọ akụrụngwa
Ikpeazụ June LG ọkwa mara ọkwa ọhụrụ LG X Mach na LG X MaxỌ bụ ezie na ruo ugbu a, anyị enwebeghị ike ịhụ ọtụtụ n'ime ha, ma ọ bụ mụta ọtụtụ ozi gbasara ha. Ọ dabara nke ọma na n'ime awa gara aga ụlọ ọrụ South Korea ewepụtala vidiyo nkwado abụọ, nke ị nwere ike ịhụ n'isiokwu a, na nke anyị nwere ike ịmụta ụfọdụ nkọwa gbasara smartphones ọhụrụ ndị a.
N'oge a, enweghị ụbọchị ọ bụla maka ịmalite ahịa nke LG X a, ma anyị na-atụ egwu na mgbe e bipụsịrị vidio nkwado ndị a, ụbọchị ahụ ga-adị nso. N'ezie, tupu ịkọ ụbọchị, anyị ga-echere nkwukọrịta gọọmentị nke LG.
N'okpuru ebe ị nwere ike ịhụ vidiyo nkwado nke LG X Mach;
Ama a na-anọchi anya 5.5-anụ ọhịa Quad HD ihuenyo, isi isii ya Qualcomm Snapdragon processor na karịa ihe niile maka ndakọrịta ya na LTE Car 9 3CA, nke atụgharịrị n'asụsụ anyị niile nwere ike ịghọta, pụtara na ọ nwere ike iru ọsọ ọsọ nke 400 Mps.
Ọzọ anyị ga-elele anya na vidiyo nkwado nke LG X Max;
Ihuenyo nke ngwaọrụ mkpanaka a ga-abụkwa sentimita 5.5, ọ bụ ezie na ọ nwere nkọwa ndị ọzọ dị mma. Ngwaọrụ ya ga - enwe naanị isi anọ, nke 2GB nke RAM na - akwado ya yana ụdị gam akporo, 6.0, nke na - adịla ka mgbe ochie maka ọnụ na - emezi mbụ na ahịa.
Kedu ihe ị chere gbasara LG X Mach na LG X Max?. Nwere ike ịgwa anyị uche gị na oghere edebere maka nkọwa na post a ma ọ bụ site na netwọkụ mmekọrịta anyị nọ ugbu a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » A na-ahụ LG X Mach na LG X Max na vidiyo vidiyo nkwado
Pokémon GO dị ugbu a na mba 27 karịa agbanyeghị nsogbu sava